लकडाउन र निषेधाज्ञाको नाममा अर्थतन्त्र तहसनहस सिडिओ गृहमन्त्री बनिदिँदा अहिले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त
मजबुत अर्थतन्त्र भएका देशले लामो लकडाउन पनि धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी प्रशासन भएको देशमा लकडाउनले ठूलो मार पारेको छ । लकडाउनको आवत-जावतमा पनि लेनदेन हुने देशको रूपमा नेपाल चिनिएको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने बस सरकारले घोषित रूपमा चैतदेखि बन्द ग¥यो । साउनमा लकडाउन खोलेपछि पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने सार्वजनिक यातायात बन्द ग¥यो, तर हरेक जिल्लामा सेटिङमा बसबाट मानिस ओसारियो । यतिसम्म स्थानीय प्रशासनले बदमासी ग¥यो कि साउन लागेपछि भारतीय नागरिकलाई बसले काठमाडौं मात्र लगेनन्, हिमाली जिल्लासम्म पु¥याए । त्यही कारण आज काठमाडौंमा कोरोनाले ठूलो महामारीको रूप लिँदै गरेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । बाहिर जिल्ला गएकाहरू बस चढेरै काठमाडौं भित्रिए । केन्द्र सरकारको नीतिलाई प्रशासन चलाइरहेकाले अवज्ञा गरिदिए ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर विश्वका धेरै देशले काम जारी राखेका छन्, अर्थतन्त्र जोगाउन । तर, नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा सबै काम गर्न रोक लगाइएको छ । कृषि कामबाहेक अन्य काम बन्दजस्तै छ । तर, विश्वका अन्य देशमा त्यस्तो छैन । नेपालको छिमेकी भारतमा पनि सबै काम सुचारु छ । सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम पनि गरिरहेको छ । नेपालमा भने लकडाउन र निषेधाज्ञाको नाममा अर्थतन्त्र तहस–नहस पार्ने काम पहिला केन्द्र सरकारले ग¥यो र अहिले स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको जग हल्लाउन सत्तापक्ष, प्रशासन, विपक्ष सबै हल्लाको पछि लागेको विश्वभर प्रस्ट हुँदै गएको छ । नेपालको अवस्था पनि ठीक त्यस्तै छ । विश्वमा पहिला सबै देश लहैलहैमा लागे । उनीहरूले पछि आफूलाई सुधार गरे । कोरोनाको बीचमा पनि काम गरे र अर्थतन्त्र जोगाइराखे । नेपाल अहिले त्यही लहैलहैमा लागेको छ । कोरोना रोकथामभन्दा पनि अर्थतन्त्र तहस–नहस पार्ने काम मात्र भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले पनि अर्थतन्त्र जोगाएर सावधानी अपनाऊ भनेको छ, तर प्रशासन बन्द गरेर ठीक हुन्छ भनेर आफैँ डाक्टर बनिरहेको छ । थुनेर विश्वमा कुनै पनि देशमा न कोरोना नियन्त्रणमा आएको छ न त अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ ।
मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह मात्र गरेनन्, अहिले विश्वमा कोरोनाको औषधि नै नबनेको, रसियाको पनि प्रचार मात्र भएको र यसको खोप वा औषधि बन्न धेरै समय लाग्ने भएकाले थुनेर अर्थतन्त्र तहस–नहस नगर्न आग्रह गरे । यसले पनि प्रस्ट पारेको छ कि नेपालका प्रशासनले गरेका लकडाउन र निषेधाज्ञा अति भइसकेको छ । यसले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर समाजमा लुटपाटको अवस्था सिर्जना गराउन सक्छ । रुसले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनाएको प्रचार ग¥यो, तर आज त्यही देशमा हजारौँको प्राण कोरोनाको कारण गइरहेको छ । दैनिक पचास हजार सङ्क्रमित थपिएका छन् । विश्वका सबै देशले भ्याक्सिन बनाउने प्रयास गरेका हुन्, तर सफल कोही पनि भएका छैनन् । भ्याक्सिन जहिले बन्छ, त्यही समयसम्म थुनेर राख्ने भन्ने कुरा हुन नसक्ने जनस्वास्थ्यविद्ले भनिरहँदा स्थानीय प्रशासन भने जनता थुन्नु, काम गर्न नदिनुलाई बहादुरी र पौरखको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
← बीस मिटर जग्गाको मुआब्जा पाउने गेर्खुखोला–बेत्रावती सडक निर्माण र मुआब्जा समस्या समाधान
नेपाली काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशन फागुनमै होला ? →